9 Siyaabood oo Looga Hortago Musuqmaasuqa PST - DataNumen
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair 9 Dariiqo oo looga Hortago Musuqmaasuqa faylka PST
9 Dariiqo oo looga Hortago Musuqmaasuqa faylka PST
Faylasha Muuqaalka PST waxay u nugul yihiin musuqmaasuq. Ma jiraan siyaabo looga hortago tan? Jawaabtu waa HAA! Hoos waxaan ku taxay 8 most siyaabo muhiim ah oo looga hortago faylkaaga PST musuqmaasuq ama waxyeelo:
HA kufurin faylkaaga PST. In kasta oo Outlook 2003/2007 ay hadda taageerto faylasha PST ee baaxadda weyn leh 20GB. Iyo barnaamijka 'Outlook 2010' wuxuu taageeraa 50GB, wali waxaa si weyn loogu talinayaa in faylkaaga PST uusan ka weynaan 10GB, maxaa yeelay:
Most hawlgallada faylka weyn ee PST aad u gaabis ah
Faylasha waaweyn waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo musuqmaasuq ah.
In kasta oo musuqmaasuqa yar yar lagu xallin karo Muuqaalka 'Outlook' ama 'scanpst', haddii feylka PST uu ballaaran yahay, markaa nidaamka hagaajinta weli waqti buu qaadan doonaa.
Muuqaalka 2003-2010 wuxuu hadda taageerayaa in la furo dhowr faylal PST ah oo ku wada jira qeybta bidix. Sidaa darteed, waxaa si weyn lagula talinayaa inaad u guurto emaylladaada dhowr faylal PST oo kala duwan oo leh xeerarka Muuqaalka, si loo yareeyo cabirka feyl kasta oo PST ah.
Ha u oggolaan in qaabkaagii hore ee PST faylkaagu u dhawaado 2GB. Microsoft Outlook 2002 iyo qoraalkii hore waxay ku xaddidayaan cabirka faylka shaqsiyadeed (PST) 2GB. Mar kasta oo cabirka faylka PST uu ku dhow yahay 2GB, waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin isbeddel ah oo faylka PST wuxuu u nugul yahay musuqmaasuq. Sidaa darteed, marwalba hubso in faylkaagii hore ee PST uu kayaryahay 1.5GB waa dhaqan wanaagsan.
Ha ku shaqeyn mug weyn oo emayl ah. Microsoft Outlook wuu xirmi doonaa haddii aad ku shaqeyso emayl aad u tiro badan hal mar. Kadibna markaad xirxirto, waa inaad si caadi ah uxirataa Muuqaalka taas oo sababi doonta faylka PST musuqmaasuq. Xadka khibrad waa 10,000 emayllada. Sidaa darteed, markaad isku dayeyso inaad xulato, guurto, nuqul ka sameyso ama tirtirto wax ka badan 10,000 emayl, ha ugu shaqeyn hal dufcadood. Bedelkeeda, ku shaqee most 1,000 emayl markiiba, ku celi hawlgalka illaa dhammaan emayllada laga shaqeynayo.
Ha ku kaydin faylkaaga PST shabakad wadista ama serverka. Faylka PST waxaa loogu talagalay in lagu keydiyo kombuyuutarrada maxalliga ah. Ha ku kaydinin meel fog fog ama server maxaa yeelay jawiga shabakadu ma taageeri karo helitaanka cufnaanta faylka PST wuxuuna sababi doonaa faylka PST musuqmaasuq badanaa. Sidoo kale HA wadaagin faylka PST ee shabakada oo HA u ogolaan isticmaaleyaal fara badan inay isla koobiga faylka PST ka helaan shabakad isku mar, taas oo u nugul faylalka musuqmaasuqa.
Ha xidhin Muuqaalka marka ay wali socoto. Haddii aad xirto Muuqaalka si aan caadi ahayn markii uu wali socdo, markaa feylka PST ee ay galayaan xilligaas wuxuu si fudud u kharribayaa. Sidaa darteed, waa inaad MARNA xidho Muuqaalka si aan caadi ahayn maareeyaha hawsha. Mararka qaarkood markaad xiratid Muuqaalka, wali waxay ku socon doontaa asalka, si loo socodsiiyo howlaha qaarkood, sida dirista / helitaanka emaylka. Xaaladda noocaas ah, mararka qaarkood, waxaad ku arki kartaa muuqaal yar oo Muuqaal ah oo ku jira saxaaradda nidaamka. Si kastaba ha noqotee, habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo haddii Muuqaalka wali uu socdo waa start "Maamulaha Hawsha" oo hubi haddii "OUTLOOK.EXE" wuxuu ku jiraa “Habka” liiska (Kala sooc liistada si ay kaaga caawiso inaad si fudud u hesho.). Mararka qaar waxaad ka heli doontaa Muuqaalka inuu weligiis xusuusta ku sii jiro. Tani caadi ahaan waa sababta oo ah Muuqaalka ayaa isku dayaya inuu diro ama ku helo emayl shabakad isla markaana shabakadaadu si sax ah uma shaqeyso, sidaa darteed Muuqaalka muuqaalka waa inuu si aan dhammaad lahayn u sugaa ama ka dib markay maqnaato dhacdo. Xaaladda noocaas ah, haddii aad rabto inaad dedejiso xiridda Muuqaalka, markaa waad joojin kartaa isku xirnaanta shabakadda ee ay adeegsato Muuqaalka gacanta. Intaa ka dib, isku xidhka Muuqaalka ayaa dhaqso u soo bixi doona waana uu soo ridi doonaa howlaha asalka isla markaana dhaqso ayuu uga bixi doonaa. Xaaladaha kale qaarkood, haddii saxaaradda Muuqaalka ama Muuqaalka uu si aan dhammaad lahayn u sii joogo, waxaa laga yaabaa inaad isku daydo Qaraarkatart Muuqaalka, sug dhowr daqiiqo, ka dibna bax, hanaan noocan oo kale ah ayaa ka caawin kara Muuqaalka inuu ka baxo nidaamka gebi ahaanba.
Had iyo jeer hubso in Muuqaalka laga baxay kahor intaadan daminin / koronto kumbuyuutarkaaga. Sida 5 oo kale, haddii aad xiratid ama aad awood u yeelatid kombuyuutarkaaga adigoon joojinayn Muuqaalka, faylkaaga PST waxay u badan tahay inuu kharribmo. Marka, in kasta oo ay waxoogaa dhib yar tahay, had iyo jeer hubi in Muuqaalkaagu ka baxay ka hor inta aanad xidhin nidaamka kombuyuutarkaaga. Ama waxaad samayn kartaa barnaamij yar oo aad tan si otomaatig ah kuugu hubiso.
Ka taxaddar barnaamijkaaga AntiVirus. Haddii faylkaaga PST uu ballaaran yahay oo ay ku jiraan emayllo badan, barnaamijkaaga antiVirus-na wuu ilaalin doonaa. Markaas most hawlgallada ay la socdaan emayllada faylkaaga PST ku jira ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona barnaamijkaaga AntiVirus. Haddii barnaamijku gaabis yahay, markaa hawlgallada sidoo kale waa la gaabin doonaa. Waxaa la soo sheegay in barnaamijyada AntiVirus qaarkood ay dhaawici karaan faylka PST. Microsoft OneCare xitaa way tirtiri kartaa faylasha PST.
Ka taxaddar Muuqaalka Ku darista 'Outlook'. Qaar ka mid ah 'Outlook Add-Ins' oo cilladaysan waxay sababi karaan faylkaaga PST musuqmaasuq haddii aan loo qaabeyn si sax ah ama uusan si habboon u socon. Sidaa darteed, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad joojiso Add-Ins-ka haddii faylkaaga PST uu si joogto ah u kharribmo.
Ku keydi faylashaada PST toddobaadle. Kaabta waa habka ugu fiican ee looga hortago luminta xogta. Had iyo jeer kaydso faylashaada PST xilliyo si mar kasta oo faylkaaga PST uu kharribmo oo aan loo soo kaban karin, waxaad soo celin kartaa keydkii ugu dambeeyay.
Haddii feylashaada PST ay kharribmeen, markaa wali waa suurtogal in la dayactiro oo la hagaajiyo, iyadoo la adeegsanayo qalabka soo socda:
scanpst.exe. Sidoo kale loo yaqaan Qalabka Dayactirka Sanduuqa. Kani waa qalab bilaash ah oo lagu rakibay Muuqaalkaaga. Waxay hagaajin kartaa most khaladaadka yar yar iyo musuqmaasuqa faylalkaaga PST. Macluumaad dheeraad ah oo faahfaahsan waxaa laga heli karaa halkan.
DataNumen Outlook Repair. Haddii scanpst uusan hagaajin karin faylkaaga PST, ama uusan soo ceshan karin emayllada aad rabto, markaa waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Repair. Waxay soo kaban kartaa faylka PST ee aadka u dhaawacmay. Ilaa iyo inta ay jiraan wax aragti Muuqaal ah oo ku jira faylkaaga PST ee musuqmaasuqa ah, markaa DataNumen Outlook Repair dib u soo ceshano iyaga oo keydiya faylka PST-ga cusub ee go'an.